Andiany 16.5-150 kVA
Range eo ho eo
Fanofana sy fanamboarana
Momba ny AGG
Momba ny Herin'ny AGG
Misiona, fahitana ary soatoavina
AGG dia Company iraisam-pirenena mifantoka amin'ny famolavolana, fanamboarana sy ny fizarazarana eo amin'ny hery rafitra taranaka sady nandroso Angovo solutions.Backed ny manam-pahaizana avy eo an-toerana fanohanana mpivarotra, AGG Power no marika mpamatsy manerana izao tontolo izao no fitodihana any ho natoky sy ny hery azo antoka lavitra famatsiana .
Ny traikefa lehibe miara-miasa amin'ny mpandraharaha, ny fifandraisandavitra toy ny orinasa, dia nitondra antsika hanao ny mari lava nihazakazaka nanampy solika miaraka amin'ny fiara mifono vy fiarovana ao an-tsaina.
Efa lasa ny fitsipika isan-karazany ny 500 sy 1000 litatra fiara mifono vy, na tokan-tena na roa sosona mimanda. Satria ny olona rehetra dia manana zavatra ilaina hafa, ny manam-pahaizana afaka injeniera ampanjifaina ny fanatitra hitsena ny fepetra manokana.
Amin'ny alalan'ny rafitra fanaraha-maso orinasa mitondra fanatitra lavitra fifandraisana fonosana, dia hanampy anareo mba hanara-maso sy hifehy ny fitaovana avy ao amin'ny birao, na raha ny hetsika.
Maro tontonana fanaraha-maso fonosana izao manasongadina fampiharana finday avo lenta izay dia manome fahafahana hahazo tsirairay mpamokatra masontsivana napetraka sy hiteraka fampahafantarana ny olana misy eo amin'ny site.Advance fahalalana ny olana mahatonga anao ho afaka mamindra ny mety Resource, rava fahavaratra fitsidihana ary amin'ny farany, vola.
Hijery ny vokatra
AGG Power Eran-tany
Miami Grande-Bretagne Dubai China Pakistana
Copyright © 2019 AGG HERY TECHNOLOGY (UK) CO., LTD